पललाई छोडेर कस्को अगाँलोमा आँचल ? (भिडियो)FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
पललाई छोडेर कस्को अगाँलोमा आँचल ? (भिडियो)
फिल्मी फण्डा । पछिल्लो समय धेरै नेपाली चलचित्रहरुमा हित गीतहरु दिदैँ आएको गायक सुगम पोखरेलको स्व​र​ र​हेको आँचल श​र्माद्वारा अभिनित नयाँ म्यूजिक भिडियो सार्वजानिक भएको छ । सुगम पोखरेलको हंसनी एल्ब्ममा रहेको गीत तिमी हिड्ने बाटोको भिडीयोमा आचँल शर्मासँगै आकाश राई र भुवन खड्का फिचरिङमा छन् ।
गीतको भिडियोमा तीन साथी बीचको मित्रतालाई देखाउन खोजिएको छ । आँचल भन्छिन् – “आफुलाई मन पर्ने गायक पोखरेलको गीतमा काम गर्न पाँउदा खुसी लागेको छ ।” “यस्तै सुगम पोखरेलले भने आफु यो गीतबाट निकै आशाबादी भएको बताएका छन् । ” सुप्रिम पराजुलीले सम्पादन गरेको भिडियोलाई बिकास सुवेदीले निर्देशन गरेको हो ।
गीतमा राजन तिमिल्सना को संगित र केशब शर्मा बेलबासे को सब्द रहेको छ । निर्देशक बिकाश सुबेदील भन्छन् – “यो भिडियो आफ्ना पछिल्लो भिडियो भन्दा फरक भएको र कोरियन लब स्टोरी बाट प्ररित भएर नेपाल प्रयोगमा गरेको बताउदै नेपाली युबा दर्शकलाई भिडीयो मन पर्ने बिश्बास लिएको बताएका छन् ।” गीतलाई अनिल के मानन्धरले खिचेका हुन् ।